कीर्तिपुर वनाउने यस्ता छन् एमाले उम्मेदवारका ५ योजना |
कीर्तिपुर वनाउने यस्ता छन् एमाले उम्मेदवारका ५ योजना
प्रकाशित मिति :2017-05-11 09:28:56
करिब २८ हजार जनसंख्या रहेको एतिहासिक नगरी किर्तिपुरको लाई आइटी शहर बनाउने परिकल्पना लिएर एमालेबाट उम्मेद्दारी दिनुभएका रमेश महर्जन र उपमेयरका उम्मेद्दार सरस्वती खड्काको भनाईमा सबै उम्मेद्दारले घोषणाा गरेको प्रतिबद्धता ५ वर्षमा पुरा हुन नसक्ने ठम्याइ छ । वास्तवमा कामको शुरुवात गरेपछि आउने उम्मेद्दारले बाकी काम गर्ने सोचका साथ उम्मेद्दारी दिनुभएका किर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर महर्जनले व्यक्त गर्नुभएका पाच प्रतिबद्धता
१. प्राकृतिक स्रोत, साधन र विकसित संरचनाहरू माथि जनताको पहुँच नारा रहेको किर्तिपुर नगरपालिकालाई आइटीको नगर बनाउने योजना रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसकेपनि सबै युवालाई आइटी सम्बन्धी तालिम दिएर सुचना प्रविधिमा भिडाउने सोच रहेको छ । सुचनाप्रविधि अन्तर्गत किर्तिपुर नगरपालिकाका केही क्षेत्रलाई फ्रि वाइफाइ जोनको रुपमा विकास गरिनेछ । विशेष गरी युवा लक्षित यो कार्यक्रमले विदेशिएका युवालानई स्वदेशमै रोजगारी दिन पहल गरिनेछ । नगरपालिकामा खेलकुदको विकास प्रवद्र्धनको लागि अधिकार सम्पन्न खेलकुद बोर्ड गठन गर्ने योजना अघि बढाएको छु । प्रत्येक वडामा खेलकुदको पूर्वाधार विकास गर्दै जाने । युवा वर्गलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्ने ।
२. यो नगरपालिकालाई सांस्कृतिकनगरपालिकाको रुपमा विकास गर्नेछु । सायद नेपालकै पुरानो नगरको रुपमा परिचय दिन सफल किर्तिपुका सबै सम्पदाहरुको पुननिर्माण गर्नेछु । भुकम्पले भत्किएका सम्पदालाई तत्काल पुननिर्माण गर्न पहल गर्नेछु । पुरानो वस्तीलाई सांस्कृतिक पहिचान दिने बनाउन मुख्य पहल गर्नेछु । ०७२ सालको भुकम्पले ध्वस्त भएका पुराना र ऐतिहासिक भवनलाई पुननिर्माण गर्न चासो देखाउनेछु । घर भत्किएका तर सो जग्गाको लालपुर्जा नभएकालाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्नेछु । पर्यटकलाई किर्तिपुर शहर मा भित्र्याउन विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नेछु । पुरानो वस्तीलाई संरक्षण गरी नया वस्तिलाई व्यवस्थित बसोवास स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ ।
प्राकृतिक र साकृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिकालाई पर्यटकीय शहरको रूपमा विकास गर्ने । होटल, रेष्टुरेण्ट तथा होमस्टे व्यवसाय सम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने । कीर्तिपुरका संभावित ठाउँमा हाइकिङ तथा साइल्किङ ट्रेल निर्माण गरी पर्यटकीय गतिविधि बढाइनेछ । चोभार–टौदह क्षेत्रलाई चलचित्र निर्माण तथा पर्यटन मैत्री स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाएको छु । जल भण्डारण र रिचार्जका लागि जलासय निर्माण शुरुवात गर्नेछु कीर्तिपुर र नैकाप बीचको बल्खु खोला प्रदुषण रहित बनाइ रक क्याइम्बिङ र मिनी बन्जि जम्प संचालन गर्नेछु ।
३ . आगामी ५ वर्ष भित्र कीर्तिपुर नगरपालिकामा पूर्ण रुपमा निरक्षरता उन्मूलन गर्न शुरुवात गर्नेछु । कीर्तिपुर क्षेत्रका सम्पूर्ण सरकारी विद्यालयहरूलाई भौतिक सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने । यस क्रममा प्रत्येक वडाका १÷१ विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्रीको रूपमा २५ वटा ट्यावलेट वितरण गरिनेछ । विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेका (एसइइ उत्तीर्ण) विद्यार्थीले कम्तिमा २५ जना निक्षरलाई साक्षर बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने र पढाए वापत नगरपालिकाको तर्फबाट आकर्षक छात्रवृत्ति वा पुरस्कारको व्यवस्था हुनेछ । नेवार समुदायको बहूल्यता रहेको यस क्षेत्रको स्थानीय सरकारको रुपमा रहने कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रशासनिक काममा नेपालभाषालाई समेत प्रयोगमा ल्याउने पहल गर्नेछु ।
नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ । नगरपालिका भित्र एक कृषि शिक्षालयको स्थापना गर्नेछु । कीर्तिपुर नगर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैको पहुच हुने गरी एक इलाईब्रेरी स्थापना गनेर्छु । कीर्तिपुरको गहनाको रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्राकृतिक वातावरण तयार गर्न सधै सक्रिय रहने साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र त्रिविसंग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समन्वयमा छात्रवृत्ति तथा कोटाको व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गर्नेछु ।
४ . नगर भित्रका प्रत्येक नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नेछु । नगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा एक सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गरिनेछ । नगर क्षेत्रभित्र रहेका खानेपानीका मुहानहरू र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै तिनको अधिकतम सदुपयोगबाट प्रत्येक घरमा प्रचुर मात्रामा खानेपानी उपलब्ध गराउने छु । कीर्तिपुर नगरभित्र सबै वडालाई जोड्ने नगरबस संचालन गर्नेछु ।
५. विकासको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न अधिकार सम्पन्न कीर्तिपुर विकास परिषद् बनाउनेछु । क्षेत्रगत तथा विषयगत विज्ञ तथा प्रबुुद्ध समूह गठन गर्ने । कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका ऐतिहासिक तथा धार्मिक पोखरी, दहहरुको संरक्षण गर्नेछु । समय प्रमुख बजार क्षेत्रभित्र बहुतले÷बहुउपयोगी व्यावसायिक भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नेछु । उपत्यका बाह्य चक्रपथ आयोजना तथा एकिकृत जग्गा विकास कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हरतरहले सहयोग उपलब्ध गराउने र सोही क्षेत्रमा नगरपालिका आफैले बस्ती विकास कार्यक्रम ल्याउनेछु ।